Facebook Branded Content Policies | Online Service Center Myanmar -->
ဒါကတော့ Online Shop လုပ်နေသူတွေ၊ OS Page ပိုင်ရှင်တွေမဖြစ်မနေသိထားသင့်သလို၊ အပျော်သဘောနဲ့ဝါသနာအရ အခြားသူတွေရဲ့ကာယ၊ ဉာဏစိုက်ထုတ်ထားမှုတွေကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြတဲ့အခါမှာ သိသင့်သိထိုက်၊ သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေပါ။
Branded Content Policies ( အမှတ်တံဆိပ်ခတ် အကြောင်းအရာဆိုင်ရာ မူဝါဒများ )
အမှတ်တံဆိပ်ခတ် အကြောင်းအရာကို အမှတ်တံဆိပ်ခတ် အကြောင်းအရာတူးလ်များထဲ ဝင်ခွင့်ရှိသော Facebook စာမျက်နှာများနှင့် ပရိုဖိုင်များတွင်သာ တင်နိုင်ပါသည်။ Instagram အကောင့်အားလုံးက အမှတ်တံဆိတ်ခတ် အကြောင်းအရာကို တင်နိုင်ပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်ခတ် အကြောင်းအရာကို လုပ်ငန်းပါတနာက တန်ဖိုးဖလှယ်ရန်အတွက် အထူးစီစဉ်ထားသော သို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးထားသော ဖန်တီးသူ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေသူ၏ အကြောင်းအရာအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့က သတ်မှတ်ပါသည်။
အမှတ်တံဆိပ်ခတ် အကြောင်းအရာတူးလ်များထဲ ဝင်ခွင့်ရှိသော Facebook စာမျက်နှာများနှင့် ပရိုဖိုင်များနှင့် Instagram အကောင့်များအတွက် အထူးစီစဉ်ထားသော တတိယပါတီပစ္စည်း၊ အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းပါတနာကို ချိတ်ကပ်ရန်အတွက် အမှတ်တံဆိပ်ခတ် အကြောင်းအရာတူးလ်များကို အသုံးပြုပါသည်။
Facebook စာမျက်နှာများနှင့် ပရိုဖိုင်များနှင့် Instagram အကောင့်များသည်များသည် အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာရမည်-
၁။ ဗီဒီယိုများ သို့မဟုတ် အော်ဒီယိုအကြောင်းအရာများတွင် ကြိုတင်၊ ကြားချိန် သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်း-အလှည့်ကျလည်ပတ်သော ကြော်ငြာများ မထည့်သွင်းပါနှင့်။
၂။ ဗီဒီယိုများ သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံများတွင် ခေါင်းစီးစာတန်းကြော်ငြာများ မထည့်သွင်းပါနှင့်။
၃။ ဗီဒီယို၏ ပထမသုံးစက္ကန့်အတွင်း ခေါင်းစီးကတ်များ မထည့်သွင်းပါနှင့်။ ဗီဒီယို၏ ပထမသုံးစက္ကန့်အတွင်း ကြားချိန်ကတ်များ သို့မဟုတ် ဆုံးချိန်ကတ်များကဲ့သို့ ကြားချိန်ဆလိုက်ကြောငြာကတ်များတွင် သုံးစက္ကန့်ဆက်တိုက်ထက် ပိုမကြာစေသော အရာသာ ပါရှိရမည်ဖြစ်ပြီး Facebook သတင်းဆောင်းပါးများ သို့မဟုတ် Instagram သတင်းဆောင်းပါးများ အတွင်း၌ မထည့်သွင်းရပါ။
၄။ ပြသစာမျက်နှာများတွင် ပြသအမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် အစမ်းကြည့်ဗီဒီယိုများရှိ အမှတ်တံဆိပ်ခတ် အကြောင်းအရာကို မထည့်သွင်းရပါ။
၅။ အမှတ်တံဆိပ်ခတ် အကြောင်းအရာတူးလ်ကို စာမျက်နှာ၊ အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းပါတနာအတွက် ゞင်းတို့၏ ကြိုတင်သဘောတူညီချက် မရှိဘဲနှင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။
၆။ Facebook စာမျက်နှာများနှင့် ပရိုဖိုင်များအတွက်၊ သင်က မဖန်တီးခဲ့သော သို့မဟုတ် ဖန်တီးမှုတွင် သင် မပါဝင်သော၊ သို့မဟုတ် သင့်ကို အစီအစဉ်တွင် မထည့်ထားသော အကြောင်းအရာကို တင်ရန် တန်ဖိုးရှိအရာတစ်ခုခုကို လက်မခံပါနှင့်။
၇။ သင် တင်ထားသည့် အကြောင်းအရာ၏ ကုန်သွယ်ရေးသဘောသဘာဝကို ညွှန်းဆိုရန်လိုအပ်သည့် ထုတ်ဖော်ချက်များကဲ့သို့ Facebook သို့မဟုတ် Instagram ကို အသုံးပြုသော လူများအတွက် လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ဖော်ချက်အားလုံးကို စီစဉ်ပေးထားသည်မှာ သေချာကြောင်း အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒများနှင့်ဆိုင်သော အမှတ်တံဆိပ်ခတ် အကြောင်းအရာနှင့် မြင်နိုင်သော ဥပမာများနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကူအညီစင်တာတွင် ဝင်ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာများပစ္စည်းအတွင်းရှိ အမှတ်တံဆိပ်ခတ် အကြောင်းအရာနှင့်ဆိုင်သော မူဝါဒများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြောငြာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများတွင် ကြည့်ပါ။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသည့်ရက်စွဲ - သြဂုတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၈
"Branded Content Policies"
Branded content may only be posted by Facebook Pages and profiles with access to the branded content tool. All Instagram accounts can post Branded Content. We define branded content asacreator or publisher's content that features or is influenced byabusiness partner for an exchange of value. For Facebook Pages and profiles and Instagram accounts with access to the branded content tool, use the branded content tool to tag the featured third party product, brand, or business partner.
3. Don't include title cards withinavideo's first three seconds. Interstitial ad cards outside ofavideo's first three seconds, such as mid cards or end cards, must not persist for longer than three consecutive seconds and must not be included within Facebook Stories or Instagram Stories.
6. For Facebook Pages and profiles, don't accept anything of value to post content that you did not create or were not involved in the creation of, or that does not feature you.
For more information on branded content and visual examples related to our policies, please visit our Help Center. For policies related to branded content within our ads product, please see our Advertising Policies.
Credit: Facebook Business Help Team
မူရင်းလင့် => fb.com/policies/brandedcontent